Home Wararka Qoor-Qoor oo bilaabay inuu iska fogeeyo fashilka dhexdhexaadinta Farmaajo & Rooble
Qoor-Qoor oo bilaabay inuu iska fogeeyo fashilka dhexdhexaadinta Farmaajo & Rooble
Qoor-Qoor oo isticmaalaya qaar kamida wasiiradiisa ayaa bilaabay inuu iska fogeeyo fashilka dhexdhexaadinta ee uu ka dhexwaday Farmaajo & Rooble. Waxa uu fartiimo kala duwan u soo dhiibay qaar kamida wasiiradiisa iyaga oo bilaabay in ay fashilka ku eedeeyay Farmaajo iyo saaxiibadiisa.
Wasiiru-dowlaha madaxtooyada Galmudug oo lagu magacaabo Cumar Shiddo ayaa sheegay in ay fashilantay waan-waantii labada dhinac uu ka dhex waday madaxweyne Axmed Qoor Qoor, kadib markii Villa Somalia caqabad ku noqotay.
“Dadaal badan oo uu bixiyay Madaxweynaha Galmudug oo marxalado badan soo maray iyadoo xiliyada qaar ay shirarku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac, ayaa gunaanadkii wuxuu caawa kusoo dhamaaday fashil, iyadoo Rw Rooble garabkiisa ay muujiyeen biseyl badan halka dhinaca kalena lagala kulmay caqabad aad u waaweyn oo soo dadajisay inuu wada hadaladii socday caawa ay istaagaan.”
Dhnaka kale, Wasiir Amniga ee Galmudug, Axmaed Macalin Fiqi ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo diiday xallinta khilaafka taagan kadib markii Ra’iisul wasaare Rooble ogolaaday waan-waantii loo soo bandhigay labada dhinac. Wasiirka ayaa sidoo kale ku baaqay in aan wakhti danbe lagu khasaarin dhex-dhexaadinta Farmaajo iyo Rooble islamarkaana Ra’iisul wasaaruhu sii wado Arrimaha doorashada dalka.
Wasiiru-dowle Cumar Shiddo ayaa tilmaamay in Galmudug mar kasta u taagantahay xallinta Khilaaf walba oo caqabad ku ah doorashooyinka iyo Amniga.
“Galmudug waxay u taagan tahay in ay xaliso khilaaf walba oo hormarka, doorashooyinka iyo amniga caqabad ku ah, waxayna qeyb ka noqon doontaa dadaal walba oo dowladnimada Soomaaliya ku hana qaadi karto.”